Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Hoteelada & Dalxiisyada » Marriott Vacations Worldwide waxay ku dhawaaqday saami qaybsi lacageed ah
Shirkadda Marriott Vacations Worldwide Corporation maanta waxay ku dhawaaqday inay oggolaadeen inay bixiyaan lacag caddaan ah oo saddexdii biloodba mar ah $0.62 saamiga guud ee saamiga shirkadda. Saami-qaybsiga waxa la bixinayaa ama agagaarka Juun 9, 2022, saamilayda diiwaanka illaa xidhmidda ganacsigu May 26, 2022.
Marriott Vacations Worldwide Corporation waa shirkad hormood ah oo fasax caalami ah oo bixisa lahaanshaha fasaxa, beddelka, kiraynta iyo meelaha dalxiiska iyo maamulka hantida, oo ay la socoto ganacsiyo, alaabooyin iyo adeegyo la xidhiidha.
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 120 goobood oo fasaxa lahaanshaha fasaxa ah iyo ku dhawaad ​​700,000 oo qoys oo milkiileyaal ah oo ku jira faylal kala duwan oo ay ku jiraan qaar ka mid ah noocyada lahaanshaha fasaxa ee ugu caansan.
Shirkaddu waxay sidoo kale ka shaqeysaa shabakadaha isdhaafsiga iyo barnaamijyada xubinnimada oo ka kooban ku dhawaad ​​​​3,200 goob dalxiis oo xiriir la leh in ka badan 90 waddan, iyo sidoo kale waxay siisaa adeegyo maareyn meelaha kale ee dalxiiska iyo guryaha hoyga.
Hogaamiye ahaan iyo hal-abuure ka ah warshadaha fasaxa, Shirkaddu waxa ay ilaalisaa heerarka ugu sarreeya ee ugu wanagsan ee u adeegida macaamiisheeda, maalgashadayaasha iyo la-hawlgalayaasheeda iyada oo ilaalinaysa xidhiidh gaar ah oo muddada dheer ah ee Marriott International, Inc. iyo Hyatt Hotels Corporation ee horumarinta, iibinta iyo suuqgeynta alaabta iyo adeegyada lahaanshaha fasaxa.